सेरोल डेल हाइरो, सेभिलको प्रान्तमा एक प्राकृतिक आश्चर्य यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | Ecotourism, गेटवे
Cerro डेल Hierro एक प्रभावशाली प्राकृतिक स्मारक को प्रान्त मा अवस्थित छ sevilla पहिले नै समुद्री सतह भन्दा लगभग सात सय मिटर माथि। रोमन कालदेखि खानीको रूपमा सञ्चालन गरिएको, यो यसको वरपर, सँगै मिलेर बनेको छ सिएरा नोर्ट प्राकृतिक पार्क.
जस्तो कि यसको नामले सts्केत गर्दछ, यो धनको लागि अत्यधिक मूल्यवान थियो hierro यसको चूनढुंगा चट्टानहरूको। तर अब यसको महत्त्व दर्शनीय परिदृश्यमा छ जुन यसको सतह बनाउँछ कार्ट। र, सबै भन्दा माथि, यसको प्राकृतिक मूल्यको लागि र उपयुक्त हुनुका लागि पैदल यात्रा र आरोहण। यदि तपाईं सेरो डेल हाइरोलाई अझ राम्ररी जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न हौसला दिन्छौं।
1 Cerro डेल Hierro को रूपान्तरण
2 Cerro del Hierro मा गर्न को लागी चीजहरू
2.1 सियरा नोर्टे डे सेविलाको ग्रीनवे
2.2 Cerro डेल Hierro ट्रेल
2.4 खनन शहर
3 Cerro del Hierro वरिपरि दुई राम्रा शहरहरू
3.2 पोर्टको सेन्ट निकोलस
4 कसरी Cerro डेल Hierro को लागी
Cerro डेल Hierro को रूपान्तरण
Cerro डेल Hierro को मूल मा फिर्ता क्याम्ब्रिअन अवधिभनेको भनेको करिब five०० मिलियन वर्ष अघि भन्नुपर्दा। यो समुद्री ओछ्यानहरूबाट गठन गरिएको थियो जुन चूना ढुstone्गामा परिवर्तन गरिएको थियो। त्यस पछि जग्गा हो karsified यसको फलामको समृद्धिको अंशलाई अक्साइड र हाइड्रोक्साइडमा रूपान्तरण गर्दै बदल्दा शिराहरू गठन भयो।
यो सबैले सेरो डेल हीरोको खानीमा डोर्‍यायो, जुन हामीले तपाईंलाई भनिसक्यौं, रोमीहरूले शुरू गरेका थिए। १ th औं शताब्दीको शुरुमै स्कटल्याण्डका कम्पनीहरूले खनिजलाई खन्याएर बनाए शहर जुन अझै पनि बसोबास गर्दैछ त्यसैले तपाईं आज पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक रेलवे लाइन पनि थियो जसले फ्रिलो स्थानान्तरणको लागि यस क्षेत्रलाई सेभिलको बन्दरगाहसँग जोडेको थियो।
र त्यस क्षेत्रमा जीवन सजिलो हुनु हुँदैन किनभने यसलाई "सेभिलियन साइबेरिया" भनिन्छ, सायद थोरै बढाइचढाइको साथ। यद्यपि, सत्य यो हो कि, जाडोमा, शून्य भन्दा केही डिग्री कम तापक्रम आउँछ।
Cerro del Hierro मा गर्न को लागी चीजहरू
हामीले वर्णन गरे अनुसार यो क्षेत्र उपयुक्त छ चढाई र पैदल यात्रा। उत्तरार्द्धको बारेमा, यसमा रमणीय वनहरू छन् र यति राम्रा मार्गहरू छन् कि तपाईं तिनीहरूलाई मिस गर्न सक्नुहुन्न। हामी ती दुई उदाहरणको रूपमा देखाउँदै छौं।
सियरा नोर्टे डे सेविलाको ग्रीनवे
पक्कै पनि रेल लेआउट जुन हामीले हामीले अगाडि उल्लेख गर्यौं अब एक हरित मार्गमा रूपान्तरण भएको छ जुन तपाईं पैदल वा माउन्टेन बाइकमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। खानी शहरको आफ्नै भाग र अधिक विशेष रूपमा तथाकथितको अंग्रेजी को घर, जसले पुरानो खानीको ईन्जिनियरहरू र प्रबन्धकहरूको लागि निवासको रूपमा सेवा गर्‍यो। हाल, यो एक घर व्याख्या केन्द्र Cerro डेल Hierro मा।
Cerro डेल Hierro ट्रेल
यो विशाल सरलताको अर्को मार्ग हो किनकि यससँग दुई किलोमिटर मात्र छ। यसको प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि यसको भ्रमण गर्न लायक छ, चट्टान ढाँचाको रूपमा विचित्रको रूपमा lapiaces र सुई। तर पनि किनकि यो पुरानो खानीको सुरुnel र ग्यालरीहरूमा प्रवेश गर्दछ।
Cerro डेल Hierro भी चढाई को लागी एक उत्तम क्षेत्र हो। वास्तवमा, त्यहाँ सेभिलको सम्पूर्ण प्रान्तमा यो खेल अभ्यास गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। कुलमा, यससँग केहि छ एक सय बीस तरिका यसले क्लासिक क्लाइम्बि ofको केहि समावेश गर्दछ तर अरू थप आधुनिक र जटिल। यदि तपाईंलाई यो खेल मनपर्‍यो भने, यो आवश्यक छ कि तपाईंले सेरो डेल हिएरोलाई चिन्नुहुनेछ।
प्रकृतिमा रमाईलो बाहेक, हामी तपाईंलाई पुरानो खानीको शहरमा जान सल्लाह दिन्छौं जुन हामीले तपाईंलाई पहिले भनिसकेका छौं। यसमा घरहरूको भग्नावशेष अवलोकन गर्नका साथै तपाईले खानी निर्माण, गोदामहरू, क एlic्गलिकन गिर्जाघर र पुरानो रेल स्टेशन। तपाईंसँग व्याख्या केन्द्र पनि छ जुन हामीले उल्लेख गर्यौं र एक रेस्टुरेन्ट जहाँ तपाईं आफ्नो ब्याट्री रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
Cerro del Hierro को शहर मा पुरानो एंग्लिकन चर्च
Cerro del Hierro वरिपरि दुई राम्रा शहरहरू
तर यस प्राकृतिक अचम्मको लागि तपाईंको भ्रमण अपूर्ण हुनेछ यदि तपाईंलाई नजिकको दुई सुन्दर शहरहरू थाहा छैन भने, केही किलोमिटर टाढा छ, र त्यो बीचमा हो सेभिल प्रान्तको सबैभन्दा सुन्दर। हामी उनीहरूको बारेमा तपाईलाई बताउन जाँदैछौं।
सेरो डेल हिएरोको एकदम नजीक तपाईले यस छोटो सेता शहर पाउनुहुनेछ जुन केवल छ हजार निवासीको बसोबासमा अवस्थित छ सिएरा मोरेना। घोषणा गरियो ऐतिहासिक कलात्मक परिसरकन्स्टान्टिना सहरमा तपाईलाई धेरै प्रस्तावहरू छन्।
सुरू गर्न, तपाईं तिनीहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ महल। यो अरब समयमा सम्भवतः पुरानो किल्लाको अवशेषमा निर्माण गरिएको थियो। जे होस्, यसको भर्खरको परिमार्जन १th औं शताब्दीको हो। यो सांस्कृतिक चासोको सम्पत्ति हो र समय बित्दै जाँदा यसको विनाश भएको छ, यद्यपि सुधारहरू हालसालै अगाडि बढाइएको छ।
तपाईले कन्स्टान्टिनामा पनि भ्रमण गर्नुपर्दछ चर्च अफ अवर लेडी अफ अवतार, १ude औं शताब्दीका एक मुदेजर मन्दिर, यद्यपि यसको भव्य धरहरा १ade औं शताब्दीको हो। त्यस्तै सल्लाहकार न्युएस्ट्रो पाद्रे जेसिस र ला कन्सेपियनको चर्चहरू र सान्ता क्लारा र टार्डनको भीडहरूको भ्रमणको लागि सल्लाह दिइन्छ।
तर शायद कन्स्टान्टिनाको सब भन्दा सुन्दर कुरा भनेको उहाँको हो ऐतिहासिक हेलमेट, टाउन हलको नियोक्लासिकल भवनको साथ र यसका धेरै सुन्दर घरहरू क्षेत्रीयवादी वा समान रूपले नियोक्लासिकल शैलीमा। ती मध्ये एक राम्रो नमूना सी होFuente को गणनाको आसा प्यालेस। अन्तमा, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं मोरेरिया छेउमा जानुहोस् र क्लक टावर हेर्नुहोस्।
पोर्टको सेन्ट निकोलस
यसबाहेक सेरो डेल हियरोबाट केही किलोमिटर टाढा तपाईंले यस सुन्दर सहरलाई अघिल्लो भन्दा अझ सानो देख्नुहुनेछ किनकि यसमा करिब six सय जनसंख्या छ। यसमा तपाई सुन्दरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ सैन सेबस्टियनको मुडेजर चर्चभित्र, जहाँ उनले बप्तिस्मा लिए फन्ट छ सान डिएगो डी अल्काला.
यसको स्मारकहरु मध्ये एक अर्को हो स्यान डिएगो को hermitage, Mudejar पनि। र यी सँगसँगै, रोमन ब्रिज गलिन्दन नदीमा १ XNUMX औं शताब्दीको ढु stone्गाको ट्रान्ससेप र मुस्लिम टावरको अवशेष।
तर सान निकोलस डेल पोर्टो अझै तपाईं को लागी अर्को आश्चर्य छ। यो बारे मा छ Huesna झरना, एक प्राकृतिक स्मारक जुन हामी तपाईंलाई हेर्न सल्लाह दिन्छौं। यो साना झरना र पोखरीको समूह मिलेर बनेको छ ज surrounded्गल र नदी किनारका वनस्पतिहरूले घेरिएको।
कसरी Cerro डेल Hierro को लागी
तपाईं यस प्रभावशाली प्राकृतिक स्थानमा पुग्ने एक मात्र तरिका सडक हो। तपाईं यसलाई कन्स्टान्टिनाबाट दक्षिण वा स्यान निकोलस डेल पोर्टोबाट उत्तरमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो केसमा तपाईले मार्ग लिनु पर्छ एक-455 र त्यसपछि SE-163। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं सैन निकोलस बाट यात्रा गर्नुहुन्छ, सडक, सीधा, छ SE-163.
अन्तमा, Cerro डेल Hierro यो अद्भुत प्राकृतिक स्मारक हो जहाँ तपाईं चढ्न र पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। तर यसको परिदृश्यबाट पनि रमाइलो गर्नुहोस् र हामीले उल्लेख गर्नुभएका दुई सुन्दर शहरहरूको भ्रमण गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग मौका छ भने, यसलाई भ्रमण गर्नुहोस्, तपाईं पछुताउनु पर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » Ecotourism » Cerro डेल Hierro